eNasha.com - सफलताका यी दिन
सफलताका यी दिन
शुरुका दिनमा अभिनयमा कुनै रुचि नभएकी अरुणिमा लम्साल अहिले नेपाली चलचित्र उद्योगकी सबैभन्दा हट प्रपर्टीको रुपमा परिचित छिन् । अहिले उनी एक साथ आधा दर्जन चलचित्रमा व्यस्त भएकी छिन् ।
सानामा अरुणिमा लम्साल चञ्चल थिइन् । कक्षामा उनी मनिटर त थिइन्, तर उनी नै सबैभन्दा बढी हल्ला गर्नेमा हुन्थिन् । तर स्कूलमा हुने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा अगुवाई गर्नेमा उनी नै हुन्थिन् । यसरी उनले नाटक, नृत्य आदि कार्यक्रममा बच्चादेखि नै भाग लिएकी थिइन् । तर उनको बालापन सकिएर जब विस्तारै आफूलाई 'केटी' भनेर थाहा पाउन थालिन्, त्यसपछि उनले अभिनय र नृत्य बिर्सिइन् ।
त्यसपछि उनी अभिनय र नृत्यभन्दा कुनै अन्तरराष्ट्रियस्तरको बैंकमा जागीर खाने सपना देख्थिन् । र, त्यसका लागि आफूले 'कमर्स' लिएर पढेकी पनि थिइन् । तर उनका लागि भाग्यले बेग्लै कुरा रचिरहेको थियो ।
जब उनी लिटिल एञ्जेल्समा बीबीएस पढ्दा-पढ्दै उनकी साथी प्रसिद्धिकाले सिनेमा खेलेको देखिन्, उनलाई एक किसिमको 'कन्टेम्पररी जलसनेस' (समकालीन इष्र्या) भयो । आफ्नी नजिककी साथीको सिनेमा चल्यो, हिट भयो र रातारात प्रसिद्धिका प्रसिद्ध भएको देखेर उनलाई पनि सिनेमाको रहर जाग्यो । उनी अनेक पटक उनकी आमा (राधा लम्साल)को सुटिङ हेर्न जाने गरेकी थिइन् । अरुणिमाको सुन्दरताबाट लोभिएका कतिपय निर्देशकहरुले उनलाई सिनेमाको प्रस्ताव आमामार्फत् नराखेका पनि होइनन् । तर अरुणिमाले ती प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
उनलाई पहिलो प्रस्ताव नरेश पौडेलले एउटा 'गेट टुगेदर'का बेलामा राखेका थिए । उनलाई पहिलो प्रस्ताव 'यस्तै रहेछ जिन्दगी' (२०५८) मा सानो भूमिकाका लागि रोजेका थिए । नायककी बहिनीको रुपमा उनी पहिलो पटक पर्दामा उदाइन् । यसपछि उनलाई टेलिभिजनमा सङ्गीत सन्ध्या कार्यक्रम चलाएकी थिइन् । उदय सोताङ, दीपक वज्राचार्यको, हरिवंश आचार्य, किरण केसी, नागेन्द्र श्रेष्ठ, हेमन्त शर्माका गीतमा अभिनय समेत गरिन् ।
जीवनरेखा (२०५९) उनको दोस्रो चलचित्र थियो । उनी त्यस चलचित्रमा सिमान्त उदाससँग देखिइन् तर उनलाई त्यस चलचित्रबाट पहिचान बनाउन खासै मद्दत गरेन । उनले तेस्रो चलचित्र इन्द्रेणी गरेकी थिइन् तर यसमा सात जना नायिकाहरु थिए । उनी कलाकारको भीडमा यस पटक पनि हराइन् । "जबसम्म नायकसँग नाच्न पाइँदैन, तबसम्म नेपालमा हिराइनको पहिचान बन्न सक्तैन । तबसम्म नेपालमा गनिएको कलाकार बन्न सकिदैन रहेछ । यो मेरो निजी अनुभव हो", इनशाडटकमको कार्यालयमा कुर्सीमा अडेस लाग्दै अरुणिमाले बताइन् ।
त्यसो त उनले चलचित्रसँगै टेलिसिरियलमा पनि काम गरिन् । गहना, वंश, असल लोग्ने, कथा, ज्योतिजस्ता श्रृंखलाले उनलाई राम्रै परिचय दिलाएको थियो ।
यसपछि 'सन्तान'मा निखिल उप्रेतीसँग नाच्न पाउँदा दङ्ग परेकी थिइन् । "खासमा सन्तानअघि मैले कुनै पनि चलचित्रमा नाच्ने-गाउने, लब-ट्रयाजेडी आदि अनुभव गरेकी थिइनँ । तर सन्तानमा यी सबै अनुभव गर्न पाउँदा म त दङ्ग थिएँ", आफ्ना शुरुवाती दिनलाई सम्झँदै अरुणिमा बताउँछिन् ।
त्यसपछि मात्रै उनको जिन्दगीको सबैभन्दा हिट फिल्ममा सहभागी भइन्- धडकन (२०६१) मार्फत् । २०६२ मा काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर र २०६३ को बैशाखमा उपत्यकाभित्र रिलिज भएको यो चलचित्र २०६३ कै सबैभन्दा बढी कमाउ चलचित्र बन्यो । सँगसँगै उनको अभिमन्यू (२०६३) उपत्यकाबाहिर रिलिज भयो । यसले उनलाई सम्भावनायुक्त अभिनेत्रीका रुपमा स्थापित गर्‍यो । पाँच वर्षमा जम्मा पाँच वटा चलचित्रमा खेलेकी उनले २०६३ भरि उनले १० चलचित्रमा खेलिसकेकी छिन् । उनी यसलाई भाग्यकै करामत मान्छिन् ।
हुन पनि उनले अभिनय गरेका भरोसा, हामीसाथीभाइ, अग्निज्वाला, कानून, सजनवा अनाडी सजनिया खिलाडी मध्ये भरोसा प्रदर्शन भइसकेको छ भने चार वटाको काम सकिइसकेको छ । अहिले आरोप, मर्यादा, देशदेखि परदेशसम्मको सुटिङ सकिइसकेको छ भने अन्य दुइ चलचित्रको सुटिङ २०६३ मा सर्ने भएको छ ।
यति व्यस्त तर यही व्यस्ततामा उनले अमित अर्यालसँग बिहे गरिन् । किन त ? "मैले करियर र निजी जीवनलाई एक साथ लैजाने निर्णय गरेँ । सात वर्षको प्रेम प्रसङ्गको केही त परिणाम आउनु नै थियो । त्यही भएर", हाँस्दै उनले बताइन् । त्यसो त उनलाई श्रीमान अर्यालका तर्फबाट राम्रो सहयोगका कारण यसमा नियमित हुन सघाउ पनि पुर्‍यायो ।
वैवाहिक जीवन के अर्थमा राम्रो, के अर्थमा नरमाइलो ? "रमाइलो नै रमाइलो । मेरो कोही छ भन्ने महसूस हुँदोरहेछ । संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि एक्लो महसूस हुँदैन । खासमा व्यवसाय र निजी जीवनलाई 'ब्यालेन्स' गर्न जाने वैवाहिक जीवन रमाइलो हुन्छ । बिहे पछि चाहिँ बिहेअघिजस्तो 'फ्रिकआउट' हुन पाइँदैन । घरमा कोही कुरिरहेको छ भन्ने 'फिल' हुन्छ र चाँडै घर जाने हतारो हुन्छ", उनले बताइन् ।
"पापाको लागि त ममी हुनुहुन्छ, तर उहाँको त मै मात्र त हुँ भन्ने फिल हुँदो रहेछ", एउटी जिम्मेवार 'घरवाली'को अभिव्यक्ति थियो । यही बीचमा उनको मोबाइल बज्यो । उनले फोन उठाइन् र भनिन्- "हेल्लो, अँ य... आई नो... अनि ?...हजुरकै कुरा भइरा'छ याँ । यसो भयो यो के केको लागि इन्टरभ्यू भइराछ... अनि बिहे गर्दाको फरक के हुन्छ भन्दाखेरी म बताइराछु, कुरा काटिराछु.... हजुर यस्तो हुनुहुन्छ, त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेर...हि..हि..हि... ल...हुन्छ...ल...बाई ।"
उनले फोन राखिन् र अन्तरवार्ताकारतिर हेरिन् । "उहाँको फोन थियो...मेरो बारेमा राम्रो राम्रो बता है भन्दै होइसिन्थ्यो...हि...हि...हि..", श्रीमान अर्यालको आवाजले रोमाञ्चित अरुणिमाको अनुहार दिप्त थियो त्यसबखत् ।
उनको श्रीमानको सबैभन्दा सबल पक्ष के लाग्छ उनलाई ? "उहाँ स्ट्रङ होइसिन्छ", हौसिँदै उनले भनिन्- "जस्तो उहाँले म यो वर्ष पढ्न थाल्छु र पास गर्छु भनिस्यो भने मैले बाजी हारिरहेकी हुन्छु । उहाँले बोलेको कुरा पुर्‍याइसिन्छ ।" "उहाँले २०६२ सालमा बिहे गर्छु भनिस्याथ्यो, र मैले अनेक बहाना बनाए पनि आखिर मैले हार्नै पर्‍यो", रमाइलो हाँसोसहित उनले थपिन् ।
उसो भए उनलाई श्रीमानको के कुरा मन पर्दैन त ? "ओछ्यानमा खाने उहाँको बानी मलाई मन पर्दैन", उनले हाँस्दै थपिन्- "त्यस्ता सानातिना अनेक हृयाबिट मन पर्दैन तर त्यो पनि एक किसिमको रमाइलो त्यसमा पनि भइरहेको हुन्छ ।"
पछि बूढी हुञ्जेलसम्म छोरानातिहरुलाई आफ्ना अभिनय कृति देखाउने रहर छ तर पैसाकै लागि मरिहत्ते गर्ने उनको कुनै रहर छैन ।
- क्यामेरामा पहिलो पटक उभिँदा उनलाई डर नै लागेन । क्यामेरामा उभिनु त ऐनाअगाडि उभिएजस्तो पो लाग्यो !
- यो 'यस्तै रहेछ जिन्दगी' चलचित्रमा अभिनय गर्नुअघि निर्देशक बिस्व बस्नेतले अरुणिमा र अन्य नयाँ कलाकारहरुलाई 'क्लोज क्याम्प'मा राखेका थिए ।
- यस्तै रहेछ जिन्दगी रिलिज हुन दुइ वर्ष लागेको थियो ।
- यस्तै रहेछ जिन्दगीको सुटिङ क्रममा राजेश हमालकी आमा र सिर्जना बस्नेतका श्रीमान् विजु रञ्जितको मृत्यु भएको थियो ।
अभिनेत्री क्या बात ! रोचक कन्ट्रोभर्सी फिल्म फेस्टिबल सोच ग्ल्यामर निर्देशक नवीनता पेज3घोषणा पार्टी अभिनेता कार्यक्रम रोमान्स सञ्चारकर्मी सेक्स प्रविधि